तपाईंको जीवनका केही निर्णायक घुम्तीहरू’bout स्मरण गर्न सक्नु हुन्छ ?
राजनीतिमा हिंसाको प्रयोग’bout तपाईंका धारणाहरू आज के छन् ? २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र संघर्ष, तपाईंहरूको ‘झापा विद्रोह’ र ‘माओवादी विद्रोह’ मा भएको हिंसा र प्रतिहिंसालाई पछाडि फर्केर हेर्दा आज कस्तो महसुस हुन्छ ?
मैले लिडरसिपतिर हेर्ने कोसिस नै गरिन। म अलिकति फरक बनावटको मानिस हुँ। प्रकृति, जगत्, जीवन आदि’bout मेरो अलिकति फरक दृष्टिकोण छ। कतिपय मान्छेले यसलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोण पनि ठान्दछन्। म त्यसलाई भौतिकवादी दृष्टिकोण भन्छु। अध्यात्मले मरेपछि परलोकको कुरा गर्छ, म इहलोकको कुरा गर्छु, परलोकको होइन। मान्छे बढी बाँचे सय वर्ष बाँच्ला। पृथ्वी अर्बौं वर्ष पुरानो छ । मलाई मेरो बाजेभन्दा अगाडिको पुस्ता’bout केही थाहा छैन । हामी क्षणभरका निम्ति यहाँ पृथ्वीमा छौं। यस्तो अवस्थामा मान, पद, प्रतिष्ठा, धन आदिका पछाडि म साह्रै जाँगर गरेर हिँड्न सक्ने मान्छे नभएकाले पनि लिडरसिपमा आउने परिस्थिति नबनेको हुन सक्छ । म निरन्तर राजनीतिमा रहें। आफ्नो काम गरें। लागेको बोलें। परिणामको प्रतीक्षा गरिनँ।
महाकाली सन्धिका ’bout म स्पष्ट छु । त्यो कुनै नयाँ सन्धि होइन। पुराना गल्ती हामीले सच्याएको हो।
त्यसपछि संविधान निर्माणमा पनि तपाईंको भूमिका रह्यो। त्यसैक्रममा भारतसँग तपाईंले जसरी स्ट्यान्ड लिनुभयो, त्यसलाई देखेर धेरै मान्छे छक्क परे, दुवै देशमा । ’cause ‘महाकाली सन्धि’ पछि तपाईंलाई भारत समर्थक भनेर हेरिएको पृष्ठभूमिमा सोधेको।
महाकालीमा हामी लामो समयदेखि असमानपूर्ण व्यवहार भोग्दै आएका थियौं । सीमा नदीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत काम गरेको लामो इतिहास थियो । मैले पाएको जानकारी र सूचनाहरूअनुसार ‘एकीकृत महाकाली र पञ्चेश्वर परियोजना विकास सन्धि’ ले गर्दा भारतले आफ्ना गल्ती सुधार्‍यो र हामीले आफ्नो हक स्थापित गर्‍यौं । महाकाली सन्धिका ’bout म स्पष्ट छु । त्यो कुनै नयाँ सन्धि होइन । पुराना गल्ती हामीले सच्याइएको सन्धि हो । त्यसैले म त्यो सन्धिको पक्षमा उभिएको हुँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ’boutमा म तीन कुरा भन्छु। पहिलो, हामीले सबैले आआफ्नो राष्ट्रिय हितलाई हेर्नुपर्छ । दोस्रो, आआफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्दा त्यसभित्र न्याय हुनुपर्छ । मेरो ज्याकेट खोसेर लगेर तपाईंको भलो होला, न्यानो होला । तर मलाई त जाडो हुन्छ नि। न्याय त हुनुपर्‍यो नि। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताहरूको पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्छ। ठूलाठूला देशहरूको प्रतिस्पर्धा होला । भारत र चीनको होला रे। वा अरूको होला रे। हामी सानालाई त्यसमा फस्नु छैन। हामीलाई त बाटो देऊ साथी हो, थिचोमिचो नगर, रगडामा नफसाऊ भन्ने चाहना मात्र छ।
भारत सायद यसकारण अत्यधिक चासो राख्छ ’cause सिमाना खुला छ, नेपालको बाटो भएर भारतमा आतंक मच्चाउन चाहनेहरूको विगत पनि त छ नि । अथवा तिब्बतलाई असन्तुलित बनाउन पनि त सकिन्छ नि ?